इभर्टनमा चम्किएका जेम्स रोद्रिगेज !
एजेन्सी । रियल मड्रिडमा जम्न नसकेका खेलाडी हुन् जेम्स रोद्रिगेज । तर, इभर्टनमा अनुबन्ध भएपछि भने उनको चौतर्फी वाहवाही रहेको छ । रियलले ठुलो अपेक्षाका साथ उनलाई अनुबन्ध गरेको थियो ।
उनी केही प्रशिक्षकका प्रिय खेलाडी पनि बने ।
तर, विस्तारै क्लबमा उनको खेल्ने समय खुम्चिदै गयो ।
उनी लोनमा बायर्न म्युनिख क्लबमा अनुबन्ध भए ।
बायर्नबाट फर्किएपछि उनले रियलमा खासै चमत्कार गर्ने मौका पाएनन् ।
प्रशिक्षक जिदानसँग उनको तालमेल मिल्न सकेन । लामो समय बेन्चमा बिताएका उनले इभर्टनमा अनुबन्ध भएपछि भने खेलमा व्यापक सुधार ल्याएका छन् ।
उनी प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटीका प्रिय खेलाडी समेत बन्न सफल भएका छन् । इभर्टनमा उनले खेल्ने अवसर पनि पर्याप्त पाएका छन् ।
कति छ सलमान खानको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । बलिउडका चर्चीत अभिनेता सलमान खानबारे जहिले पनि उनको रिलेशनसिप र फिल्मलाई लिएर चर्चा हुन्छ । उनको सम्पत्तिलाई लिएर कमै चर्चा हुने गरेको छ । उनको फिल्महरुले बितेका वर्षहरुमा १०० करोडभन्दा बढी
'छिट्टै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिँदैछौँ'
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सबैको संयोजन, सहभागिता र सहकार्यबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।